Izifundo ezi-3 zokuThengisa abaThengisi kufuneka baFunde kuThengiso | Martech Zone
NgoMgqibelo, Septemba 19, 2015 NgeCawa, ngoSeptemba 20, 2015 Douglas Karr
U-Erin Sparks uqhuba i-Edge yerediyo yeWebhu I-podcast siyaxhasa kwaye sithatha inxaxheba veki nganye. Mna no-Erin siye saba ngabahlobo abalungileyo kule minyaka idlulileyo kwaye saba nengxoxo emangalisayo kule veki. Ndandixoxa nge-ebook ezayo endandiyibhalele I-Meltwater eziza kupapashwa kungekudala. Kwincwadi ye-ebook, ndingena kwinkcukacha malunga nomceli mngeni wokuphuhlisa isicwangciso sentengiso kunye nokulinganisa iziphumo zayo.
Olunye uluvo olujikelezayo entlokweni yam ngokoqobo Ukuphuhlisa iseti yokufa, nganye idayisi ibe ngu izinto ezahlukeneyo zisetyenziswe kwisihloko esithile. Qengqa idayisi kwaye umisele i-engile yokubhala umxholo kuyo… mhlawumbi i-infographic enezibakala, ibali lendaba, kunye nefowuni kwisenzo. Okanye i-podcast eneempembelelo ezabelana ngezifundo ezithile ezizodwa. Okanye mhlawumbi sisibali sokubala esisebenzisanayo esinceda ukumisela imbuyekezo kutyalo-mali.
Isiqwenga ngasinye somxholo sinokumalunga nesihloko esinye, kodwa ungacinga ukuba - ngobuchule - isiqwenga ngasinye sikwahlukile kwaye sithatha injongo yabaphulaphuli abathile. Ukuqengqa idayisi, ewe, ayisiyondlela ebukrelekrele yokuqikelela kunye nokuvelisa umxholo onentsingiselo ovelisa iziphumo zeshishini eziyimfuneko. Oku kuzisa kwintengiso.
Intombazana yakho, IKait Karr, usebenze kwivenkile yokubonelela ngobuhle iminyaka embalwa. Wowonwabela lo msebenzi, kwaye wawumfundisa itoni malunga nokuthengisa kunye nendlela endicinga ngayo kwakhona ngeendlela zomxholo kule minyaka idlulileyo. Njengomphathi owamkelayo, intombi yam yayijongene nayo yonke imveliso engena evenkileni, yayijongene noluhlu lwezinto, kwaye iphethe imiboniso yentengiso kuyo yonke ivenkile.
Izifundo zoRhwebo lwaBathengisi boMxholo
Inventory -Njengoko abakhenkethi bevenkile bekhathazeka xa ivenkile ingenayo imveliso abayifunayo, uphulukana nabathengi kuba awunawo umxholo kwindawo yakho efunwa ngamathemba. Asithandi ukujonga isicwangciso sentengiso somxholo njengokuthatha uluhlu lwempahla kuba abathengisi bathanda, endaweni yoko, baqonde njengoko behamba. Kutheni kunjalo? Kutheni le nto abathengisi bomxholo bengenzi uluhlu oluncinci olusebenzayo lomxholo? Endaweni yokubuza ukuba zingaphi iiposti zebhlogi ngeveki iinkampani ekufuneka zipapashe, kutheni le nto abathengisi bomxholo bengasekeli ulindelo lwe ulawulo olupheleleyo lomxholo iyafuneka?
Uphicotho -Endaweni yokuphuhlisa iikhalenda zomxholo eziphakamisa izihloko eziqhelekileyo ukuba zibhalelwe inyanga ezayo, kutheni singenzi uhlalutyo lwesithuba phakathi koluhlu olufunekayo kunye nomxholo osele upapashiwe? Oku kuyakuqinisekisa uphinda-phindo oluncinci kwaye kuncede ukukhupha umxholo. Ngokufana nokwakha indlu, isikhokelo sinokwakhiwa kuqala, emva koko iinkqubo eziphantsi, kwaye ekugqibeleni nokuhombisa!
promotion - Ngelixa ivenkile inetoni yeemveliso, ivenkile ikhetha ukugxila kukonyusa iimveliso ezinenzuzo enkulu okanye ezitsha inyanga nenyanga. Abasebenzi bafundisiwe, amaphulo ayaphuhliswa, uyilo lweemveliso luyilelwe, kunye neqhinga le-omni-channel yokukhuthaza umxholo uphuhliswa ukwandisa inzuzo kunye neziphumo. Ixesha elingaphezulu, njengoko iimveliso kunye nezibonelelo zijikeleza, ivenkile ithumela imiyalezo emnandi kunye nokwenyusa ukuqhubeka nokonyusa iziphumo zeshishini.
Ngesi sizathu, kufuneka sahlule ukubhala kokubhengezwa kwintengiso yomxholo. Umntu onobungqina bokukhuphela kunye netalente yokuhlela ayithethi ukuba banengqiqo eyimfuneko yokwenza uluhlu, ukuphicothwa, kunye nokuphucula ukunyusa kwishishini lakho. Le infographic evela e-Uberflip ihamba kuzo zonke iimpawu zabathengisi bomxholo abaphumeleleyo.
Inqaku eliphambili: Ndiza kukugcina ngeposi kunye ne-ebook!
tags: uphicotho-mxholoUluhlu lomxholoUmthengisi wentengisoumxholo wentengiso infographicumxholo wentengiso yomxholoukukhuthaza umxholoqesha umthengisi wentengisoIvenkileuberflip